‘जनतासँग मालिकको जस्तो व्यवहार हामीले कति गर्यौ ?’ « Sansar News
१२ श्रावण २०७४, बिहीबार ०८:१०
‘कामरेडहरू आज हाम्रो सामु कमरेड कलाधर आइसक्नु भएको छ । अब कार्यक्रम सुरु गर्नतर्फ लागौँ है,’ जिल्ला अध्यक्षतर्फ फर्कंदै सचिव कमरेडले अनुमति मागे ।
‘म आजको यस विशेष अन्तरक्रिया सहितको प्रशिक्षण कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन जिल्ला अध्यक्ष कमरेड महाप्रसादलाई अनुरोध गर्दछु’ उद्घोषक कमरेडले सभापतित्व गराए ।
‘कार्यक्रमको प्रमुख प्रशिक्षकका रुपमा आउनु भएका हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीका प्रदेश सहइन्चार्ज कमरेड कलाधरलाई आजको कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता गरिदिनुहुन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’ उद्घोषक कामरेडले प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गराए ।
‘अब म कार्यक्रममा उपस्थित कामरेडहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन जिल्ला पार्टी सहइन्चार्ज कमरेड सुमनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ उद्घोषकले सुमन कामरेडलाई बोलाए ।
‘कमरेडहरू आज हामी विशिष्ट घडीमा छौँ । महान तथा ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्ध कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी आज प्रथमबाट प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी आज प्रथम तहको स्थानीयतहको समिक्षा गरिकन दोश्रो चरणको निर्वाचनको संघारमा छौँ, यस अवसरमा उपस्थित हाम्रो पार्टीका कार्यालय सदस्य तथा प्रदेश सहइन्चार्ज कमरेड, सचिवालय सदस्य कमरेड अजीत, पोलिटब्यूरो र महाधिबेशन आयोजक सदस्य कमरेडहरू तथा जिल्ला पार्टीको सदस्य कमरेडहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु । आजको कार्यक्रमको प्रकृति अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण शैलीको भएको हुँदा कमरेडहरूले सुन्ने मात्र होइन विचार पनि राख्न पाउनुहुने मैले बुझेको छु,’ सुमन कमरेडले स्वागत गरे ।
कमरेडहरू हामीले अघिल्लो बैठकमा सामान्य समीक्षा मात्र गर्यौ तर रुपान्तरणको कार्ययोजना बनाउन पाएनौं । आत्मालोचनाका प्रक्रियालाई पनि आत्मसाथीकरण गर्न सकेनौँ । यो पटक हामीले हाम्रा सबै खराबीलाई सक्ने गरी अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । निर्वाचनमा भएका कमजोरी र प्रवृत्तिगत समस्याहरूको सहि निदान गरेर हामी गतिमा बढ्नुपर्दछ ।’ उद्घोषक कमरेडले आफ्ना भनाई राखे ।
‘हाम्रा समस्या धेरै छन् कमरेड हामी जनतासँग लामो र झर्को लाग्दा कुरा धेरै राख्छौं, सर्वसाधारण जनताले मालेमावाद र नेपालपथका दार्शनिक र सैद्धान्तिक कुरा कसरी बुझ्छ ? सरल, प्रष्ट र जनभाषामा जनताका समस्या सम्बोधन हुने गरी बोले पो जनता आकर्षित हुन्छ ।’ कमरेड निर्मलले शुरुमा राखे ।
‘जनताको कुरालाई धैर्यतापूर्वक सुन्ने र विनम्रतापूर्वक ग्रहण गर्ने हाम्रो परम्परा विपरीत जनतासँग मालिकको जस्तो व्यवहार हामीले कति गर्यौ ?’ कमरेड प्रभाले राखिन् ।
‘मैले यति गरिदिए र उति गरिदिए भनेर जनतालाई भनेपछि जनताले कसरी हेर्छ ? आत्मप्रशंसा गरेर आन्दोलन बढ्छ ? देवत्वकरण गरेर, गुनगान गाएर र भजनमण्डली खडा गरेर रुपान्तरण प्राप्ति हुन्छ…?’ यो बिचमा यस्ता कयौँ गल्ती हामीले गरेका छौँ’ कमरेड तिलकले कुरो राखे ।
‘जहिले पनि ‘म’ मात्र भन्ने ‘हामी’ भन्न नसक्ने, कमाण्डर र इन्चार्जलाई मुखीयापद ठान्ने ? समूह वा सामूहिकता अस्वीकार गर्ने… हामी कति बिग्रेका छौँ कमरेड…’ कमरेड प्रवलले भनाइ राखे ।
‘नेतृत्वसँगै कार्यकर्ता, कार्यकर्तासँग शुभेच्छुक र शुभेच्छुकसँग सर्वसाधारण जनता जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरो त बुझ्नु प¥यो नी’ ज्ञानको श्रोत जनतालाई नमान्ने ? इतिहासका निर्माता जनतालाई नठान्ने ? समाजभित्रका असल मानिसको पहिचान गर्न ध्यान नदिने ? असलहरूलाई स्थापित गर्न कन्ज्यूस्याईं गर्ने, यसरी पनि चल्छ ?’ कामरेड प्रमिलाले प्रश्न गरिन् ।
‘गलत कुरा पनि सहि हुन् भनेर जबरजस्त गर्ने ? मुढे तर्क र रुढीग्रस्त बासी खाना जर्बजस्त खाउ भन्ने ? विरोधिका आलोचनामा उत्तेजित भै हाल्ने ? रचनात्मक सुझावलाई पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने ?, के यसरी नै चल्छ र कामरेड यो पार्टी ?’ कमरेड विभिषणले प्रश्न थपिरहेँ । ‘मुखीया शैलीमा आदेश लाद्ने, विना अध्ययन जे मनलाग्यो त्यहि बोल्ने, दम्भ देखाएर, फकाएर र थर्काएर मान्छेलाई काबुमा लिन्छु भन्ने ? के नेतृत्वले शैली समिक्षा गर्नुपर्दैन ?’ कमरेड पुजाले प्रश्न गरिन् ।
‘जनताभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने बैज्ञानिक र सहि मान्यतालाई कुल्चने ? जनतालाई रैती र कार्यकर्तालाई दास ठान्ने ? आफू मोजमस्ति गर्ने र अरुलाई त्याग र बलिदानीको रटान घोक्न लगाउने ? न त कार्यकर्तालाई जाँगर चल्यो नत जनतालाई आकर्षित गर्न सकियो, निमर्म हुनुपर्दछ कामरेड, निर्मम भएर जान सक्नुपर्दछ’ कामरेड रोहनले भनाइ राखे ।
‘कामरेडहरू म तपाईहरूका प्रश्न, जिज्ञासा र सुझावप्रति नतमस्तक छु । हामीले यस्ता कुरामा धेरै पहिलेदेखिनै सच्चीने भनेका पनि हौं । यतिबेला हामीलाई व्यवहारले पनि थप अनुभूति गराएको छ । छोटो–मिठो बोल्ने, जनताको कुरालाई विनम्रतापूर्वक सम्बोधन गर्ने, व्यक्तिगत घोचपेचमा नजाने, आत्मप्रशंसा व्यक्तिवाद र भजनमण्डली हुनबाट रोक्ने, गुणगान र देवत्वकरण अस्विकार गर्ने, जनतालाई ज्ञानको श्रोत र इतिहासका निर्माता स्विकार्ने, विरोधि र आलोचना प्रति सहिष्णु हुन सक्ने, मुखियाको रुपमा नभएर सेवकको रुपमा प्रस्तुत हुने म होइन हामी भन्ने र अरुलाई स्थापित गर्ने कुरामा हामी गम्भीर बन्नै पर्छ, म यी सबै कुरा मनन गर्दै हाम्रो समग्र कमजोरीको पुनरावलोकनका लागि क. सन्दीप, क. सुमन र र क्षमता रहेको ३ सदस्यीय समिति घोषणा गर्न चाहन्छु । कमरेड कलाधरले प्रस्ताव गरे, सहभागीहरूले टाउको हल्लाए ।